netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:netzayမှာ ဘာလို့ဈေးဝယ်သလဲ?
ပစ္စည်းမှန် ဈေးမှန် အချိန်မှန် ပြီး သင်နဲ့ အတူတသားတည်းရှိမယ့် NetZay
Customer စိတ်တိုင်းကျမှု နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး !
သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံး - ၂၄ နာရီပတ်လုံး အချိန်မရွေး ပိတ်ရက်မရှိ နေပူပူမိုးရွာရွာ ကားဘယ်လောက်ကျပ်ကျပ် စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပဲ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဈေးဝယ်လိုရပါပြီ။ ရှော့ပင်းမော မှာ ဈေးပတ်နေသကဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစား မြောက်များစွာကိုလဲ တစ်နေရာတည်းမှာ ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် ကလစ်တချက်နှိပ်ရုံမျှဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ဈေးနှုန်း အသုံးပြုပုံ စသည်တို့ကို သေချာစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ တစ်ဆိုင်ဝင်တစ်ဆိုင်ထွက်ဖြင့် တစ်နေကုန်လုံး အချိန်ပေးစရာ လူပင်ပန်းစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။ အပြင်ထွက်ပြီး ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင် လိုရာခရီးရောက်ဖို့ ခရီးစရိတ်နဲ့ အစားအသောက်အဖိုးအခ အတွက်ပါတွက်ချက်ရပါတယ် ။ netzay အွန်လိုင်းမှာ ဈေးဝယ်ရင်တော့ အပိုထွက်ငွေများပါ လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်ဈေးနှုန်းအချိုသာဆုံး - ပစ္စည်းအမျိုးအစားများစွာ အမှတ်တံဆိပ်များစွာကို တစ်နေရာထဲမှာ တစ်ထိုင်တည်းကြည့်ရှုရွေးချယ်နိုင်သည့်အပြင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောပစ္စည်းများကို မှတ်ထားနိုင်ပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားပြီးမှ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည် ။ NetZay မှ Customer များဆီသို့လဲ အထူးလျှော့ဈေး အစီအစဉ်များ ၊ ဈေးပွဲတော်များကို အမြဲမပြတ် သတင်းပေးပို့နေသောကြောင့် အများထက်သက်သာသောဈေးနှုန်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ ။
ပစ္စည်းစစ်မှန်မှုအတွက် အယုံကြည်ရဆုံး - NetZay မှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချပေးရာတွင် ရောင်းချသောကုမ္ပဏီများနှင့် netzay.com.mm တို့အကြားခိုင်မာသောသဘောတူညီမှုများနှင့် အာမခံချက်များ ရယူထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ပစ္စည်းစစ်မှန်မှုအတွက် ၁၀၀% အာမခံချက် အပြည့်အ၀ပေးနိုင်ပါသည် ။ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်အစစ်အမှန်များသာ ရောင်းချပေးပါသည် ။ ဆင်တူရိုးမှားအတုအပ နှင့် ပစ္စည်းအဟောင်းများ လုံးဝ (လုံးဝ) မရောင်းချပါ ။
၀န်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံး - ရန်ကုန်မြို့ နှင့် မြန်မာပြည်အနှံ မြို့များသို့ ပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် အမြန်ဆုံး ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ ။ ၇ ရက်အတွင်း ပစ္စည်းပြန်လည်လဲယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည် ။ Customer များ၏ လိုအပ်ချက်များ ၊ မေးခွန်းများ ၊ အခက်အခဲများ ကို ကူညီနိုင်ရန် ရုံးချိန် တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိ မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ ၃၀ နာရီ အတွင်း Customer Hot Line Service ဖြင့် ကူညီဖြေကြားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည် ။